Gallsy aretina - fitsaboana
Ny aretin'i Gallstone dia fomba iray izay mahatonga ny vato hiorina ao amin'ny gallbladder sy (na) ao amin'ny valan-databatra. Ny vatosoa dia miorina amin'ny singa fototra amin'ny kilaoty - manavaka ny sira, ny kolesterola, ny pigment ary ny vato mifangaro. Ny haben'izy ireo sy ny endrik'ireo vato ihany koa dia miovaova - ny sasany amin'izy ireo dia fasika tsara kokoa noho ny milimetatra, ny hafa kosa afaka mahazo ny holatra rehetra ao amin'ny gaza. Mandritra ny fotoana lava, ny aretina dia mety ho marimaritra iraisana, ary matetika ny marary no mianatra momba ny fisian'ny vato raha tsy taorian'ny fanadihadiana ultrasound.
Ny fomba fitsaboana cholelithiasis
Ny fitsaboana ny cholelithiasis dia ataon'ny fomba amam-pihetsiketsehana sy ny fampiharana. Na izany aza, tokony ho fantatrao fa aorian 'ny fitsaboana, ny famolavolana miverimberina tsy voatanisa, raha tsy voavaha ny antony fototra amin'ny aretina.
Avelao ny marary tsirairay amin'ny fomba fitsaboana ity aretina ity:
Fitsaboana - fitsaboana cholelithiasis tsy misy fandidiana miaraka amin'ny fanampiana amin'ny fanafody simika (takelaka). Ity fomba fampiharana ity dia azo ampiharina amin'ny vato kôlesterôla ihany, izay mety ho levona. Ny fanafody siramamy tsiranoka (ursodeoxycholic, chenodeoxycholic) na ny famokarana ny orinasa maniry ny fampiasana ny asidra asidra gasy (rongony ny fasika tsy mety maty ) dia ampiasaina. Ny fitsaboana nentim-paharazana toy izany dia maharitra: ny pilina dia nalaina farafahakeliny 1-2 taona. Tsara ny manamarika fa lafo dia be loatra ireo zava-mahadomelina ireo ary misy vokany hafa.
Ny metaly ultrasound dia ny famotehana vato any amin'ny faritra madinika amin'ny alàlan'ny hetsika maningana manokana. Ity fomba ity dia azo ampiharina amin'ny tsy fisian'ny cholecystitis , ny vatan'ny kodiarana amin'ny vato ka hatramin'ny 2 cm ary ny fifandraisana mahazatra eo amin'ny gaza. Ny vatosoa dia nesorina tamin'ny fomba voajanahary, izay manome fahatsapana hafahafa be ilay marary, na fomba fanafody ampiasaina hanesorana azy ireo.
Ny laser dia fomba fampiasa laser manokana, izay ampiasaina mivantana amin'ny alalan'ny fanasambe eo amin'ny vatana ary manoritra ireo vato. Ny tsy fahampian-tsainan'ity fomba ity dia ny fisian'ny aretina azo avy amin'ny fiterahana amin'ny tranom-borona moka.
Ny fandidiana fitsaboana no fomba fitsaboana mahazatra indrindra. Ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny vato lehibe izy io, miaraka amin'ny fahatsapana mahery vaika sy matetika miverimberina, ny fisian'ny dingana fampijaliana. Ny fantsom-panafody dia nesorina teo amin'ny sisin'ny hypochondrium eo amin'ny ilany havanana, hatramin'ny 30 santimetatra amin'ny halavany. Ny fahaverezan'io fandidiana io dia mety ho fandehanana anaty na fampandrosoana ny fizotry ny aretina.
Ny cholecystectomy ny Laparoskopika dia fomba iray maoderina izay nanesorana ny vato miaraka amin'ny valanorano amin'ny alalan'ny laparoscope - rantsana kely mamy miaraka amin'ny fakantsary lahatsary. Izany no mahatonga ny fisamborana kely maromaro (tsy mihoatra ny 10 santimetatra). Ny tombony amin'ity fomba ity dia ny fanarenana haingana avy amin'ny fandidiana sy ny tsy fisian'ny hadita be loatra.
Ny tsirairay amin'ireo fomba ireo dia manana tombony, ny tsy fahampiana ary ny fanoherana. Ny safidin'ny fomba tsara indrindra amin'ny fanesorana vato avy amin'ny gaza dia ataon'ny mpitsoka manokana tsirairay.
Mihatra amin'ny cholelithiasis - fitsaboana
Ny fihanaky ny cholelithiasis (kolikoly biliary) dia miteraka fanaintainana mafy, tazo, kivy, dyspepsia. Ireo soritr'aretina dia miseho amin'ny ankapobeny noho ny hetsiky ny fako. Ny fanafihana mahery vaika dia fanehoana ny fampidirana hopitaly maika ary, amin'ny tranga sasany, dia misy fepetra maika. Misy ihany koa fanapahan-kevitra mba hanamaivanana ny areti-maso sy hanaintaina ny fanaintainana.
Ahoana ny fomba hisorohana ny fofona ratsy amin'ny vava?
Fanaintainana rhinôma - soritr'aretina sy fitsaboana amin'ny olon-dehibe
Avamis na Nazonex?
Famotehana ny fototry ny karandoha
Tifitifitra avy amin'ny mari-pana
Hira ho an'ny fiarovana trano
Rabi-pahafatesan'ny olona - fotoana fanararaotana, soritr'aretina
Avy amin'inona ny fitaovana hisafidianana lakozia?
Ahoana ny fomba hanamboarana duck iray ho an'ny fofona ao anaty lafaoro?
Ahoana no nahitana an'i Svetlana Khodchenkova?
Fety amin'ny fomba fanao any Hawaii
Jeans mainty miaraka amin'ny tavy ambony
Curtains with Velcro
Andro iraisam-pirenena momba ny kolontsaina
Manga ho an'ny volon'ondry amin'ny aloe